बच्नको लागी अपनाउनुहोस यस्ता उपाय ,के कारणले यूरिक एसिडको रोग हुन्छ ?
प्रकासित मिति : ११ भाद्र २०७५, सोमबार प्रकासित समय : २२:४०
काठमाडाै।पछिल्लो समय नेपालीहरूमा विभिन्न खाले स्वास्थ्य समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ । रोग बढ्दै जानुका अनेक कारणहरूमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो खानपान तथा जीवनशैली । अव्यवस्थित जीवनशैली तथा खानपानमा गरिने बेवास्ताकै कारण भोग्नु परिरहेका तमाम रोगहरूमध्ये एक हो यूरिक एसिड अर्थात् बाथ । के कारणले हुन्छ यूरिक एसिड ? अनि यसले मानव स्वास्थ्यमा कस्तो असर गर्छ ? लगायत खानपान तथा उपचार विधिबारे प्राकृतिक तथा क्रोनिक ब्याक पेन एक्सपर्ट डा. सुनिल पौडेलसँग प्रशासन डटकमले गरेको कुराकानी।